प्रचण्डको सांसदहरुसमक्ष प्रश्न गिनिज बुकमा नाम लेखाउन मिल्छ मिल्दैन ? तराइको फाटेको मन जोड्न ओलीलाई गगनको सुझाव | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रचण्डको सांसदहरुसमक्ष प्रश्न गिनिज बुकमा नाम लेखाउन मिल्छ मिल्दैन ? तराइको फाटेको मन जोड्न ओलीलाई गगनको सुझाव
प्रकाशित मिति २८ फाल्गुन २०७४, सोमबार ११:४५ लेखक नेपालीजनता
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कतिजना प्रधानमन्त्री बनाए गिनिज बुकमा नाम लेख्न मिल्छ भन्दै सांसदहरुसमक्ष प्रश्न गरेका छन्। नेपालमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका १० वर्षमा १० प्रधानमन्त्री बनेको र आठ जनालाई आफैंले प्रस्ताव गरेको भन्दै दाहालले यस्तो प्रश्न गरे।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिँदै प्रचण्डले आफूलाई यसमा खुसी र गर्व दुवै भएको बताएका हुन्। दाहालले भने, ‘यो पटक मलाई नयाँ अनुभूति भएको छ। संविधान घोषणा गरेर। तीन तहको निर्वाचन गरिसकेपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको कसम खाएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पहिलो हस्ताक्षरकर्ता भएकोमा गर्वानुभूति छ।’
उनले अहिलेको प्रस्ताव र हस्ताक्षर बिल्कुलै नयाँ भएकोसमेत जानकारी दिए। ‘यो विगतको जस्तो होइन। विलकुल नयाँ कुरा हो। संसदीय व्यवस्था र अभ्यासको कुरा पटकपटक भन्नुभएको छ। संविधानमा के लेख्यौँ सबैलाई थाहा छ। हामी अहिले समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै छौँ। विल्कुल संसदको मात्र कुरा गर्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ’, उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले आइतबार संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाइको दिव्य शक्तिको मोहको कारण के हो भनी प्रश्न गरेका छन्।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू महाथिर मोहम्मदको ठूलो प्रशंसक हुनुहुन्छ रे। के अब हामी त्यही दिशामा अघि बढ्न लागिरहेका छौँ?’
उनले ओलीले लगभग दुई तिहाइ पाउने स्पष्ट भएको उल्लेख गर्दै आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रहसमेत गरे।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धोती लगाउनेहरुको मन फटाएको उल्लेख गर्दै मतले मात्र त्यसलाई जोड्ननसक्नेसमेत बताए। ‘खबरदारी गर्न हामी प्रतिपक्षमा बस्न चाहन्छौँ,’ उनले भने।
‘सरकारलाई बेलाबेलामा घच्घच्याउन हामी प्रतिपक्षमा बस्न चाहन्छौँ’, उनले भने।
उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब जे पनि बोल्न नपाइनेसमेत उल्लेख गरे।
रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दियो चुनौति
रुपन्देही । रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा केहीदिन अघि सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमबहादुर कुँवरलाई हाजिर गर्न नदिई फिर्ता…
बाबु-छोरीबीच बिहे हुने अनौठो परम्परा !
काठमाडाैं । छोरीबीचको नाता संसारमा निकै पवित्र नाता हो । बुवा र छोरीबीच…
मुम्बइ। बलिउड अभिनेत्रीको नयाँ इन्स्टाग्राम फाटोले धेरैको ध्यान तानेको छ । फोटोका दायाँ किनारामा कसैको खुट्टा देखिएको छ ।…